ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ Ross က Barkley ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Ross Barkley အတ္ထုပ္ပတ္တိများသည်သူ၏ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ အစောပိုင်းဘဝ၊ မိဘများ၊ မိသားစု၊ မိန်းကလေး / ဇနီး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်လူနေမှုပုံစံစသည်တို့ကိုအပြည့်အဝဖော်ပြသည်။ သူ၏အစောပိုင်းကာလများမှသူကျော်ကြားလာသည့်အချိန်အထိထင်ရှားသောအဖြစ်အပျက်များကိုသင့်အားအပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးပါမည်။
Ross Barkley ၏ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ။ Instagram: Instagram ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဟာခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူသိများတဲ့အချက်ပါပဲ။ သို့သော်သူနှင့် ပတ်သက်၍ လူသိနည်းသောအရာအများစုသည်ဤဇီဝတွင်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Ross Barkley ၏ကလေးဘဝပုံပြင်:
Ross Barkley ကို ၁၉၉၃ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းလီဗာပူးလ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကမွေးဖွားခြင်းအားဖြင့်တစ် ဦး Sagittarius ဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်နိုင်ဂျီးရီးယားဖခင် Peter Effanga မှမွေးဖွားခဲ့ပြီးမော်ဒယ်လ်အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဗြိတိသျှမိခင် Diane Barkley (အိမ်ဂိုးသမား) ဖြစ်သည်။
Ross Barkley ၏အစောဆုံးလူသိများသောကလေးဘဝဓာတ်ပုံတစ်ခု။ Instagram: Instagram ။
Ross ကအစား Effanga ဖြေဆိုခြင်း၏ '' သည်သူ၏မိခင်ရဲ့သမီးကညာကိုအမည်ဖြင့်ဖြေဆိုဖို့ရွေးချယ်Barkley'' သူကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူ့နိုင်ဂျီးရီးယားဖခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာခဲ့တယ်။ ရော့စ်သည်သူ့အဖေ၏အားထုတ်မှုကြောင့်ဘောလုံးစတင်ကစားခဲ့သည်။ သူသည်ပြောင်းရွှေ့လာသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သူ၏တစ် ဦး တည်းသောအမွေဆက်ခံသူအားသူ၏အမြတ်အများဆုံးအလုပ်အဖြစ်ဘောလုံးယူရန်အခွင့်အရေးပေးခဲ့သည်။
Ross အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးဘောလုံးစတင်ပုံ Barkley:
၎င်းသည်ဥရောပရှိရွှေ့ပြောင်းမိဘများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ၏မိဘများ Leroy စိတ်ကောင်းသော, အိုဇေး, ခရစ်ယာန် Benteke စသည်တို့သည်အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဖြစ်သည်။ သူ့ဖခင် Peter Effanga မှတစ်ဆင့် Ross နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် အဲဗာတန် အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်တွင်ဘောလုံးစတင်ကစားခဲ့သည် Evertonian လူငယ်စနစ်။
အဲဗာတန်သို့ရောက်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Ross Barkley ၏ဓာတ်ပုံ။ Instagram: Instagram ။
Ross Barkley ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဘောလုံး၏အစောပိုင်းနှစ်များ -
ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အနေဖြင့်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ရေးသားခြင်းအပြင်ရုရှား၌ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းနှင့်သူ၏ရွယ်တူများနှင့်ပြိုင်ဘက်များထက်ပိုမိုကြီးထွားစေသည့်မျိုးရိုးဗီဇကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းလူသိများခဲ့သည်။
Ross Barkley သည်အလွန်ကြီးမားလွန်းသဖြင့်သူသည်အသက်အရွယ်မှားယွင်းနေသည့်အမျိုးအစားတွင်ကစားနေသည်ဟုထင်လိမ့်မည်။ Instagram: Instagram ။
ရိုမီလူလူကာကူ အလားတူကြီးထွားမှုရောဂါမျက်မြင်။ တကယ်တော့အသက် ၁၅ နှစ်မှာ Ross ကအသက် ၁၈ နှစ်အောက်လူငယ်တွေနဲ့ရောနေပြီ။ ၎င်းသည်သူ၏အလွန်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
Ross Barkley ၏ကျော်ကြားမှုအဖြစ်အပျက်
သူသည်သူ၏လူငယ်အသင်းကိုအဓိကအောင်ပွဲများနှင့်လီဗာပူးလ်နည်းပြဟောင်းမှတင်ဆက်ခဲ့သော Echo ဖလားကဲ့သို့သောအဓိကပြိုင်ပွဲများကိုအကြိမ်ကြိမ် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ Rafa ဘင်နီတက်ဇ်.
သူ၏လူငယ်အသင်းကိုအဓိကအောင်ပွဲများသို့မည်သူ ဦး ဆောင်သည်ကိုကြည့်ပါ။ PN ESPN ။
Barkley အဆိုပါ 2010-2011 ရာသီ၏အစောပိုင်းအဆင့်၌သူ၏အဲဗာတန်ပွဲဦးထွက်စေမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့သူတစ်ဦးလေးနက်ခြေထောက်ဒဏ်ရာထောကျအပြီးနှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်။ သူကလီဗာပူးလ်နဲ့တိုက်မိ အန်ဒပညာသည် အင်္ဂလန်လက်အောက်တွင်-19 ရဲ့အတူတာဝန်အပေါ်နေစဉ်။
ဒီဇင်ဘာလ 2011 များတွင်မကြာမီ 18 လှည့်ပြီးနောက်သူမှာအသစ်တခုရေရှည်စာချုပ်ရေးသား အဲဗာတန်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Ross Barkley ၏ဆက်ဆံရေးဘဝ
စူပါကံကောင်းရော့စ် Barkley အရှိဆုံးငြိမ်းချမ်းသောရှိသည်ဖို့လူသိများသည်, လက်တွေ့ကျတဲ့, အသိဉာဏ်ရှိသော, လက်တွေ့ကျကျဆုံးနဲ့ တာဝန်ရှိရည်းစား, ဖျားခါဖြစ်လို့ယူဆတယ်ဇနီး။ သူမသည် Zoe ကို Riozzi ထက်မကအခြားလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သင်မေးကောင်းမေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ချီးမွမ်းခဲ့သနည်း။ အကြောင်းပြချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ Zoe Riozzi သည်မြေကြီးပေါ်သို့ဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ သူမ၏ခြေဆွံ့သောဆံပင်ပုံပန်းသဏ္itာန်ကအားလုံးကိုပုံဖော်သည်။ သူမအနေဖြင့်ဘောလုံးသမားများ၏ဇနီးနှင့်ရည်းစားများဝတ်ဆင်မည့်အစားရိုးရှင်းသော Parka ဂျာကင်အင်္ကျီကိုသူမအလုပ်သူယူနီဖောင်းနှင့်ပြားချပ်ချပ်ဖိနပ်များတွင်လူသတ်သမားဒေါက်များထက်ဝတ်ဆင်လိုသည်။
သူမကရိုးရှင်းတဲ့မိန်းမလား။ Daily: DailyMail ။
သူမသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များအတွင်းရော့စ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စတင်တွေ့ဆုံသောအခါသူသည်လောကသို့လူသိများလာသည်။ သူမသည် Barkley ၏ခြေထောက်များကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်ထိန်းထားရန်တာဝန်ရှိသည်။ သူမသည်အင်္ဂလန်လူကိုကျော်ခိုင်မာတဲ့ကိုင်ရှိပါတယ်။ ဘောလုံး WAGS အများစုနှင့်မတူဘဲ Zoe သည်ငွေနှင့်ကျော်ကြားမှုစသည့်ပစ္စည်းများအတွက်စိတ်မဝင်စားပါ။ တကယ်တော့သူမကတစ်နာရီကိုပေါင် ၉ ပေါင်ရှိတဲ့ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ပါ။
သူမ၏ရည်းစားမကြာသေးမီကအောင်မြင်မှုထောင်ချောက်များနှင့်မကြာမီမြင့်တက်လာတော့မည့်တစ်ပတ်ပေါင် ၄၀,၀၀၀ ရှိသော်လည်း Zoe သည်အစဉ်အဆက်မောင်းနှင်မည့်အဆင်မပြေဆုံးကားကိုမောင်းနှင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Bentley နှင့် Range Rovers များသည်လှည့်လည်ရန်အသုံးပြုလေ့ရှိမည့်အစား Miss Zoe Riozzi သည်ကျိုးနွံသော Fiat 40,000 ၏ဘီးနောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသည်။ သူမသည်ပေါင် ၄၀၀၀ သာကုန်ကျသောနိမ့်သော key Fiat500 ကိုမောင်းသည်။
ဘယ်လိုကျိုးနွံတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ Daily: DailyMail ။
သူမ၏ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနှင့်ဆင်တူဖြစ်ပါသည် ဝိန်းရွန်နီတစ်ချိန်ကဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းနေသည့်အင်္ဂလန်ကိုဆက်ထိန်းထားရန်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသောဇနီးကာလက်ရွန်းနီ Thou Zoe သည် Coleen ထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်တူညီသောအသက်အရွယ်နှစ်မျိုးလုံးလီဗာပူးလ်၏တူညီသောနေရာမှဖြစ်သည် '' ခိုင်ခံ့သွား ''.
အမှန်မှာ၊ သူတို့၏ဆက်ဆံရေးသည်အစွမ်းခွန်အားမှခိုင်မာလာသည်။ ချစ်သူနှစ် ဦး စလုံးသည်ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်နှင့်ဒူဘိုင်းသို့သွားရောက်လည်ပတ်လိုကြသည်။ Zoe ၏တွစ်တာပရိုဖိုင်းတွင်အားလပ်ရက်တစ်ခုကသူတို့ကိုနေရောင်ခြည်ဖြာထွက်နေသောရေကန်တစ်ခုမှပြသည်။ သူမသည်ဒီမှာပိုပြီးလှပကြည့်ရှုကြ၏။
Ross Barkley ကို Zoe နှင့်ရက်စွဲတစ်ခုတွင်ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ Twitter Twitter ။
Ross Barkley ၏မိသားစုဘဝ
ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျဖွစျနိုငျသကဲ့သို့အံ့သြသွား, ဒီမှန်သည်။ Ross က Barkley နိုင်ဂျီးရီးယားနွယ်ဖွားဖြစ်ပါတယ်။
သူ၏အဘိုးပင်နိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုးဖြစ်သည်။ ကြိုက်တယ် ဒိလီမဟာမိတ်များ, Barkley နိုင်ဂျီးရီးယားအဘို့ကစားရန်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်သိရသည်။ သူ 2013 အတွက်အင်္ဂလန်ဝါရင့်ကစားသမားသည်မိမိယှဉ်ပြိုင်ပွဲဦးထွက်အောင်ရှေ့တော်၌ထိုစူပါလင်းယုန်ထွက်သည်ကိုဖွင့်ခွင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲအတွက်မော်လ်ဒိုဗာဆန့်ကျင်သည်သူ၏ပွဲဦးထွက်မတိုင်မီက Ross ကတစ်ချိန်ကနိုင်ဂျီးရီးယားသူအင်္ဂလန်နိုင်ငံနှင့်ကင်းကိုယ်စားပြုနိုင်သည့်နိုင်ငံများ၏တဦးကပြောသည်။ သူ၏ဖခင်, အင်ဂျင်နီယာပတေရုသ Effanga နှင့်မိခင်, Diane Barkley နှစ်ဦးစလုံးတုန်းပဲလီဗာပူးလ်နေထိုင်ကြသည်။
Ross Barkley ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ
Ross ကမွေးခြင်းဖြင့် Sagittarius ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအရာသီခွင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စပ်လျဉ်းအဖြစ်သူသည်အောက်ပါ attribute ကိုရှိပါတယ်။
Ross က Barkley ရဲ့အားသာချက်များ: ဟာသ, ရက်ရက်ရောရောပံတောင်းကြေးနီတူးဖော်ရေးတို့နှင့်ကြီးသောအသိ။
Ross က Barkley ရဲ့အားနည်းချက်များ: , အလွန်စိတ်မရှည်ကယ်မနှုတ်နိုင်ထက်ပိုပြီးကတိပေးထားတယ်နေပါစေဘယ်လို undiplomatic ဘာမှပြောပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကိုရော့စ် Barkley likes: လွတ်လပ်ခွင့်, ခရီးသွား, ဒဿနနှင့်အိမ်ပြင်ဖြစ်ခြင်း။
အဘယ်အရာကိုရော့စ် Barkley နှစ်သက်မှုမရှိ: Clingy သတ်ခံရလူများ, နဲ့ off-the-မြို့ရိုးကိုသီအိုရီ။
Ross Barkley ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - The Great Punch:
Ross Barkley သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင်ထွက်ခွာသွားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူကကြမ်းပြင်သို့မကျရောက်မီမျက်နှာ၏ဘေးထွက်အတွက်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်ခဲ့သည်။ Barkley ၏ရှေ့နေကသူသည်သားကောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် "သူ့ကိုချဉ်းကပ်သူတစ်ဦးလူစိမ်းတို့က unprovoked တိုက်ခိုက်မှု" ။
အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုယနေ့နံနက်အစောပိုင်းနာရီအတွင်းလီဗာပူးလ်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ Santa Chupitos ကော့တေး bar မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့အဖွဲ့ Goodison Park မှာ Leicester စီးတီးကျော်တစ်ဦး 4-2 အနိုင်ရတယ်ပဲနာရီနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
Ross Barkley ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများ - လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုခံရသူ
အဖြူရောင်ဖြစ်နေစဉ်တွင်သင်၏မိဘသို့မဟုတ်အာဖရိကမှဘိုးဘေးဘီဘင်တစ် ဦး ကိုရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်သလား။ … အဲဗာတန် တစ်ချိန်ကဝေဖန်သူများက branded ကြောင်းရော့စ် Barkley အကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကျော်က၎င်း၏ဝုဏ်အတွင်းကနေ The Sun သတင်းစာကိုပိတ်ပင်ခဲ့ "လူမျိုးရေးခွဲခြား".
ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် Kelvin Mackenzie တစ်ဦးမှနိုင်ဂျီးရီးယားကနေအဘိုးသူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Barkley, "ဟုအဆိုပါတိရစ္ဆာန်ရုံမှာဂေါ်ရီ" နှင့်သူ၏ဝင်ငွေနှင့်အတူလီဗာပူးလ်အတွက်သာအခြားလူမူးယစ်ဆေးဝါးကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။
သူသည်တစ်ချိန်ကပင်ဆောင်းပါးရှင်တစ် ဦး ၏လူမျိုးရေးအရစော်ကားခံခဲ့ရသည် The: TheSun ။
အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်စီးခဲ့သည် "သူတို့ရော့စ်မှာ ape go အဘယ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာရဲ့" Barkley နှင့်တစ်ဦးဂေါ်ရီ၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူတွဲပြီး။
ဤစာအုပျကိုမွငျလြှငျအပျေါမှာ, လီဗာပူးလ်ရဲ့မြို့တော်ဝန်ဂျိုး Anderson တို့ကခေါ်တော်မူသောရဲများနှင့်လွတ်လပ်သောစာနယ်ဇင်းစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ကအစီရင်ခံခဲ့သည် "လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနှင့်ထိုးစစ်" ။ The Sun ရဲ့ထုတ်ဝေသူသတင်းကိုဗြိတိန်ကကြေညာချက်ကြောင့် Mackenzie ကပြောသည် "ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်နှင့်အတူဆိုင်းငံ့ခဲ့" ။
Ross Barkley ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ချယ်လ်ဆီး Snub:
Ross ကတစ်ကြိမ် Stamford Bridge ကိုတစ်ဦး switch ကိုပြီးစီးခဲ့ပေမယ့်ချဲလ်ဆီးအသင်းများအတွက်စိတ်ပျက်စရာလွှဲပြောင်းပြတင်းပေါက်ခဲ့သောအရာကိုအဆုံးသတ်နောက်ဆုံးနေ့နေ့၌ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဦး-အလှည့်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အန်တိုနီယိုအဆက် အစီရင်ခံစာများအင်္ဂလန်တွင်နိုင်ငံတကာကြောင့်သူ့ကိုရောက်ရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖို့သဘောတူညီချက်ထဲကဆွဲထုတ်ခဲ့အကြံပြုပြီးနောက်ချယ်လ်ဆီးမှတစ်ဦးသို့ပြောင်းရွှေ့ချဖွင့်ဖို့ရော့စ် Barkley ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာကျော hit အန်တိုနီယိုအဆက် ဖုန်းပေါ်မှာ။
အခိုင်အမာအစီရင်ခံစာများ အန်တိုနီယိုအဆက်ရဲ့ သူ၏ဖုန်းပိတ်ထားသို့မဟုတ် 23 နှစ်အရွယ်စကားမပြောတတ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်အောက်မှာခဲ့ရသည်။ စဉ်တွင် ရေတွက် သောအမှုဖြစ်ခဲ့သည်ကိုငြင်းပယ်သူလက်မှတ်ထိုးမပေးဘို့ Barkley မှာသိမ်မွေ့တူးရည်ရွယ်။ သူ၏စကားအတွက် ...
အကယ်၍ မည်သည့်ကစားသမားကမဆိုကောင်းမွန်တဲ့ကလပ်တစ်ခုအတွက်ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူကလက်မှတ်ထိုးမှာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမန်နေဂျာသည်သူမလက်မှတ်ထိုးမီကစားသမားတစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်အရေးကြီးသည်။ အခြားအချိန်များတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါသူတို့ကိုစကားမပါဘဲအများအပြားကစားသမားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါပြီ။ "
Ross Barkley အတ္ထုပ္ပတ္တိ - ဝီကီဒေတာ
နာမည်အပြည့်အစုံ Ross က Barkley
အမည်ပြောင် Ross ကသူဌေးက
မွေးရက် ဒီဇင်ဘာလ5၏ 1993th နေ့က
မွေးရပ်ဒေသ လီဗာပူးလ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
ဖခင် Peter Effanga
မိခင် Diane Barkley
မိန်းမကလေး Zoe Riozzi
အမြင့်အလေးချိန်6′1″, 87kg
Ross Barkley ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏သိသာထင်ရှားသည့်ရေးသားချက်များကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At Lifeboggerကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်ကလေးဘဝပုံပြင်များနှင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုမျှတစွာ၊ တိကျမှန်ကန်စွာဖြန့်ဝေရန်လှည့်ပတ်နေသည်။ သင့်အားကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ဤဆောင်းပါးတွင်မှန်ကန်သောအရာများကိုအစီရင်ခံရန်မှတ်ချက်ပေးရန်အကွက်ကိုအသုံးပြုပါ။
ရော့ Holding ကုမ္ပဏီကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်